लमजुङ-राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत लमजुङको सुन्दरबजार सडक खण्ड निर्माणको कार्यमा ढिलाइ भएको छ । लोकमार्गको पश्चिम खण्ड (प्लट नं.८ र ९) अन्तर्गत सुन्दरबजार क्षेत्रमा गत असार अघिनै कालोपत्रे गर्ने भनिएपनि काममा ढिलाइ भएको हो ।
जिल्लाको सुन्दरबजार–५, घुमाउने चौतारादेखि मध्यनेपाल नगरपालिका सिमानासम्म १६.२ किमि सडक खण्ड अन्तर्गत असार मसान्तसम्म नौ किमी सडकमा कालोपत्रे गरी बाँकी खण्डमा ग्राभेल गरिने निर्माण पक्षले जनाएको थियो । सुरुमा मुआब्जालगायतका समस्या भएको र पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीकै कारण काममा ढिलाइ भएको मध्यपहाडी लोकमार्ग पश्चिम खण्डका प्राविधिक ई. रामकुमार श्रेष्ठले बताए । “सुरुमा मुआब्जाको विषयमा काम गर्न ढिलाइ भएको हो,” ई. श्रेष्ठले भने, “अहिले मुआब्जाको विषयमा विवाद छैन, निर्माण पक्षले नै ढिलो गरिरहेको छ, काम छिटो गर्न दवाव दिईरहेका छौं ।”
२०७२ मा ठेक्का सम्झौता भएको सो खण्डमा गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र सक्नुपर्ने काम निर्धारित समयमा नसकिएपछि प्लट नम्बर ८ मा एक वर्षका लागि म्याद थप भएको छ । पश्चिम खण्डको प्लट नं. ८ निर्माणको लागि स्वच्छन्द, शंकरमाली जेभीले जिम्मा लिएको हो । प्लट नं. ८ मा म्याद थप गरेर काम सुरु भएपनि प्लट नं. ९ मा भने कामनै सुरु हुन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।
चार खण्ड गरेर मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण थालिएको लमजुङमा तीन खण्डको काम भए पनि सुन्दरबजारको पाउदीदेखि सत्रसय खण्ड र मध्यनेपालको रानीपानीदेखि रामबजारसम्मको भागमा स्थानीयको अवरोधका कारण कामनै सुरु हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत लमजुङमा करिब ९ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणमा अन्यौल भएको छ । जिल्लामा पर्ने ४५ किलोमिटर सडकमध्ये सुन्दरबजारमा ८ किमी र मध्यनेपालको १ किमी खण्डमा स्थानीयको अवरोधका कारण अन्यौलता छाएको हो ।
भोर्लेटारसँगै सुन्दरबजारको बजार क्षेत्रमा पनि सडक निर्माणको काम रोकिएको छ । जिल्लामा मध्यपहाडी लोकमार्गको कतिपय भागमा कालोपत्रे भईसकेको छ भने कतिपयस्थानमा तयारी भईरहेको छ । यस्तै केहि भागमा सडक चौडा पार्ने क्रम चलिरहेको छ भने भोर्लेटर र सुन्दरबजारमा स्पष्ट मापदण्ड भएपनि सडक निर्माणका लागि स्थानीयहरूविच मत बाझीएको छ ।
बजार संरचनालाई यथावत राखी अन्यक्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने भनेपनि स्थानीयले सडकको स्पष्ट मापदण्ड, बैकिंङ कारोवार र जमिन तथा संरचना विक्री वितरण फुकुवा नभएसम्म अवरोध भईरहने बताएका छन् ।
भोर्लेटारमा काम सुरु हुनै सकेन
राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तगर्त लमजुङको भोर्लेटारमा स्थानीयको अवरोधले निर्माण कार्य रोकिएको छ । मध्यनेपाल–६, भोर्लेटार क्षेत्रको करीव चार किलोमिटर विवादले उक्त खण्डको काम सुरुनै हुन नसकेको हो । भोर्लेटारको रानीपानी देखि रामबजारसम्मको चार किलोमिटर सडक विवाद भएको हो । सडकको नक्शांकन भएको ट्रयाक छोडेर खेतीयोग्य जमिन मास्न लागेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन् । सुरुको योजना अनुसार भोर्लेटारस्थित हालको मुख्य सडकखण्डबाट मध्यपहाडी लोकमार्ग नक्सांकन भएपनि स्थानीयले छलकपट गरी खेतीयोग्य जमिनबाट सडक लैजान खोजेको स्थानीयको आरोप छ ।
कायम भइसकेको सडकलाई छोडेर अन्यत्र खेतीयोग्य जमिन मास्न नदिने भन्दै स्थानीयले स्थानीयले संघर्ष समितीनै गठनगरेका छन् । नक्शांकन भएको जग्गाबाट नै सडक लैजानु पर्ने संघर्ष समितिका अध्यक्ष हरीबहादुर थापाले बताए । सडक डिभिजनले कायम गरेको ४२ मिटर फराकिलो बाटोलाई छलेर नयाँ ६४ मिटरको सडक कायम गर्नु छलकपट भएको भन्दै यसको विरोधमा उत्रिएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष थापा मगरले बताए । “हामी विकास विरोधी होईनौ” थापा मगरले भने “आयोजनाले सुरुमा नक्शाँकन गरेको ट्रयाकबाट काम सुरु गरे आँफुहरूको कुनै विरोध हुन्न ।”
बजार भन्दा बाहेक ट्रयाक खोल्न भनिएको जमिन स्थानीयहरूको खेतीयोग्य जमिन भएकोले उक्त मार्गमा सडक बनाएमा किसानहरूको उठिवास हुने उनिहरूको गुनासो छ । बजारबासीहरूले आयोजनापक्षलाई लोभलालच देखाएर सडकको ट्रयाकनै परिवर्तन गर्न खोजेको उनिहरूको आरोप छ । आर्थिक वर्ष ०६४-६५ बाट सुरु गरिएको बहुचर्चित मध्यपहाडी लोकमार्ग २४ जिल्ला जोडिएर एकहजार सातसय ६५ किलोमिटर लामो हुने बताइएको छ । करिब एकहजार किलोमिटर पुरानो चल्तीको सडक र थप ७५६ किमी नयाँ ट्रयाक खोलेर सुरु भएको मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्व र पश्चिम दुई खण्डमा बाँडेर काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।